Xa ndikhulelwe, ndandifuna ukuphepha ukusebenzisa izidakamizwa zezilwanyana ezinobuthi, kodwa ke inkohlakalo yayibonakala iyifumene kunanini ngaphambili. Isisombululo sam ngelo xesha kwakufuneka sigqoke oko ndibiza ngokuba 'ishidi le-DEET', eyayiyiphepha elidala lepotton elalifakwe nge-SC Johnson's Off! I-Wood Wood formula. Nangona le nto yayiphumelele kakhulu, kwakungenakulungeleka ukusetyenziswa malunga nezingane, ngoko ndandenza uphando kwiindawo ezikhuselekileyo, ezitshatyalaliswayo.
Ndandifunda ukuba abaninzi ababizwa ngokuba yizilwanyana ezixhamla umlingo abazihlaziyiyo iintshukumo (umz., Ii-ultrasonic devices), kodwa ezinye zixhaswa ngophando oluhloniphekileyo kwaye zisebenza ngokusemthethweni.
Iimvumi zineendlela eziyinkimbinkimbi zokufumanisa iindwendwe kunye neentlobo ezahlukeneyo zobumongwane zisabela kwiimpawu ezahlukeneyo. Uninzi lwemiyane lusebenza ngokuntwela kokusa nokuhlwa, kodwa kukho nazinambuzane ezifuna imithombo emini. Ungakuphepha ukubetha ngokuqinisekisa ukuba awukhange umtshi, usebenzisa izityezelo ukukhwela umlumnye kwenye indawo, usebenzisa i-repellent, kwaye ugweme izenzo ezinciphisa ukuphumelela kwalowo olahlayo.
Sebenzisa olu luhlu lwezinto kunye nemisebenzi ekhangele umlingo njengoluhlu lwezinto ozoziphepha okanye ezingasetyenziselwa ukukhwabanisa umlenze kude nawe.
Uninzi lwamangqamu sebenzisa umbono wokufumana abaphathi abakude. Impahla emnyama kunye namagqabantshintshi zikhangele phambili.
Unika i-carbon dioxide xa ushushu okanye usebenzise. Ikhandlela elivuthayo okanye omnye umlilo omnye umthombo we- carbon dioxide .
Ukhulula i-lactic acid xa ususebenzisa okanye emva kokutya ukutya ezithile (umzekelo, ukutya okunesonka, ukutya okuphezulu-potassium).
Iziqhumiso ezifayo okanye eziqhamo
Ukongezelela kumnandi, iintlobo zeenwele, kunye neengqabunga ezinomlilo, qaphela ukucoceka kweentyatyambo eziqhenqileyo ezivela kwintsimbi epholileyo kunye namaphepha amacwecwe.
Ukushisa okuthe ngqo kuxhomekeke kuhlobo lomiyane. Uninzi lwemiyane luyakhangwa kumaqondo atshisayo aphelileyo.
Iimvumba zithandwa ngumfutho ngenxa yeemichiza eziquletheyo kwaye ngenxa yokuba yandisa umswakama emzimbeni wakho. Namaxabiso amancinci amanzi (umzekelo, izityalo ezimanzi okanye izidaka zamadaka) ziza kubetha umlum. Amanzi ahleliyo avumela ukuba ummiyane avelise.
Kulula kakhulu ukwenza uqobo lwakho umlumko ophilileyo. Ezi mveliso zendalo ziza kubuyisa ngokukhawuleza umlingo, kodwa zifuna ukuphindaphinda ngokuphindaphindiweyo (ubuncinane zonke iiyure ezingama-2) kunye neziphumo eziphezulu kune- DEET . Ngenxa yokungafani phakathi kweentlobo zeentongomane, iimveliso eziqulethe ezininzi zivame ukuphumelela ngakumbi kunezo ezinezithako ezilodwa. Njengoko uyakubona, ukunyuka kwezinto zendalo kudla ukukhula kweoli.
I-lemon eucalyptus ioli
Mhlawumbi amafutha avela eVerbena, Pennyroyal, iLavender, iPine, i-Cajeput, i-Basil, i-Thyme, i-Allspice, iSoybean, ne-Garlic
Esinye isityalo esivela kwisityalo, i-pyrethrum, inambuzane. I-Pyrethrum ivela kwiintyatyambo zeCrysanthemum cinerariifolium .
Izinto eziMgangatho oPhezulu oPhezulu
Ukuxutywa kweMvula, UkuPhepha, okanye ukuDoba
Ukuphuphuma kwe-evaporation esuka kwi-Wind okanye High-temperatures
Gcina ukhumbule ukuba 'izendalo' azithethi ngokuzenzekelayo 'kukhuselekileyo'. Abantu abaninzi banomdla wokutshala amafutha. Ezinye izidumbu zezilwanyana zendalo ziyingozi. Ngako oko, nangona iindleko zendalo zibonelela ezinye iikhemikhali zokwenza izinto, nceda ukhumbule ukulandela imiyalelo yomenzi xa usebenzisa le mveliso.
Yintoni Ukukhawuleza Kokukhanya Ngamayela Ngehora?
I-Phosphorylation kunye nendlela eSebenza ngayo
Imibuzo yoVavanyo lweMpesenti
Yintoni i-Joker kuMdlalo we-Poker?
I-LPGA School Qualifying School (Q-School): Ifomathi kunye nabanqobileyo
Igama Lokuqala, Igama Lokugqibela, okanye Isihloko?
Funda Ukuvelisa (okanye Uphephe) I-Pool Phonsa
20 Iimfuyo ezixhambileyo ezifanele ukutshabalalisa izigumbisi zabo ngokukhawuleza
Xa Abantwana Banga Bangakwazi Ukuqala Ukukhwela?
Indlela yokufunda i-Volleyball Setter
Ukudibana noYakobi Umncinci: Umpostile kaKrestu oqaqambileyo
Iimpawu ezisixhenxe ezitsha zeHlabathi eziPapasho
I-Portmanteau Amagama: Iintsingiselo, iziSebenzi kunye nemizekelo
Ngaba Kukho Inkcazelo Yenkwenkwezi Yenkwenkwezi yaseBhetelehem?
Ukuphononongwa koMgangatho we-American Athletic Entry Level Iskrini seSikethi